အခြေခံပညာ-၂- မန္တလေး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အခြေခံပညာ-၂- မန္တလေး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အခြေခံပညာ-၂- မန္တလေး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
Posted by ဂျဲသု on Aug 23, 2011 in Copy/Paste |5comments
ကိုးတန်းထိနေခဲ့ပါတယ် ကလေးက စာတော်တော့
သွားပါတယ်။ အကယ်၍ စာမေးပွဲမှာ
ဆေးမန်းမှာပဲတက်ခွင့်ရအောင် စစ်ကိုင်းမြို.က အထက်တန်းကျောင်းမှာ မအပ်ပဲ
စစ်ကိုင်းမြို.နဲ့ဆို ဆိုင်ကယ် တို.ကားတို.နဲ့သွားရင်
ပေးလိုက်ရပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ငွေကြေးလက်ခံပြီး
မသိပါ။ ကျောင်းသား/သူ များကတော့
အပြစ်ကျူးလွန်တာက ပညာရေးဌာနက၀န်ထမ်းပါ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမဟုတ်ပါ
အလွန်ခက်ခဲသွားတာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအခြေခံပညာ ၂
ကြေမွဘ၀ပျက်သွားနိုင်တာကို သိစေချင်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ကြပါ အပြစ်လုပ်တာက
ပညာရေးဝန်ထမ်းပါ ခုအရင်ဆုံး အပစ်ပေးခံရတာက
ပညာရေး နယ်ပယ်မှာလဲ အကျင့်ပျက်နေကြပါပီ။ကလေးတွေ သနားပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကျောင်းသားလေးတွေကို အပြစ်ယူစရာမလိုပါဘူး။ခုကဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်။ကျောင်းအုပ်ကို ဘယ်လိုအရေးယူလိုက်ပြီလဲ ဟင်။မြန်မာနိုင်ငံတလွှား မလဲ ဒီကျောင်းအုပ်တွေကြောင့်လဲ စိတ်ပျက်စရာပါလားနော်။တခါက ရခိုင်ပြည်နယ်က အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတယောက်က ကျောင်းသားတွေကို Briefing. ပေးတော့ မင်းတို့ ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေ မြန်မာစာကို ၁၀၀ရအောင်ဖြေကြပါတဲ့။ဆရာမတွေကိုရောကြိုးစားသင်ကြပါပေါ့။အဲဒီတော့ ဆရာတွေရောဆရာမတွေပါ ပြုံးစိစိပေါ့။ကဲရှင်တို့ ဘဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ. မြန်မာစာနော်. မြန်မာစာ—–သူ့ ဖြေခိုင်းတာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်
ခုထိတော့ အဲဒီကျောင်းအုပ်ကြီးကိုဘာအပြစ်မှ မပေးရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ညီမလေးကတော့ ဒီနှစ်ဆယ်တန်းကို မဖြေတော့ဘူးတဲ့။ နောက်နှစ်မှပဲဖြေတော့မယ်ပြောပါတယ်။
ကျုပ်ထင်တာ ဆက်ပြောကြည့်မယ်..။ ကျောင်းအုပ်တွေထက် ကျောင်းစာရေးတွေက လက်စောင်းထက်တယ်ထင်တာပဲ..။ ဘာထောက်ခံချက်လေး သွားတောင်းတောင်း ပိုက်ဆံပေးမှ..။ ဟတိုတစ်လောက အလုပ်လျှောက်ဖို့ရာ ဆယ်တန်း အောင်မြင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်လေးတစ်ခုကို 2500 တောင်းလွှတ်လိုက်သတဲ့လေ………။။။ လိုက်သွားတဲ့ကောင်နဲ့ ကျောင်းစာရေးလုပ်တဲ့ကောင်က ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းတွေတဲ့နော်..။ ကြုံဖူးကြရဲ့လား
အခြေခံ ပညာ(၂) ကလုပ်တာလား။ တိုင်းပညာကလုပ်တာလား။
သေသေချာချာမေးကြည့်ရဲ့ လား။ ကျမ ထင်တာကတော့ တိုင်းပညာနဲ့
ပိုဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ စစ်ကိုင်း ကျောင်းတစ်ကျောင်း ကျောင်းမှာ စစ်ကိုင်းကို
အိမ်ပြောင်းလာပြီဆိုပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့ ပြ အပ်ရင် ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကြေမွဘ၀ပျက်သွားနိုင်တာကို သိစေချင်ပါတယ်။) ဆိုတဲ့ စာသားလေးအတွက်
စိတ် မကောင်းဖြစ်မိလို့ဝင်ရေးတာပါ၊ တတ်နှိုင်သမျှ စကားလက်ဆင့် ကမ်းပေးပါ့မယ်။
ဖြေရှင်းပေးနှိုင်လောက်တဲ့ နေရာမှာမရှိ တဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပြီးပါပြီ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးပါပြီ။ တိုင်းပညာကိုအရင်သွားအသနားခံတာပါ။တိုင်းပညာက ဒီကိစ္စကို အခြေခံပညာ၂ ကကိုင်တာဆိုလို. အခြေခံပညာ ၂ ကိုလည်း အသားခံပြီးပါပြီ။ ဘယ်လိုမှလုပ်မရလို. ဒီမှာတင်တာပါ